August 30, 2020 adminLeaveaComment on प्राधिकरणमा कुलमान पुन दोहोरीन्छन,मन्त्री पुन
नेपाल वि’द्युत प्राधि_करणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दो’श्रो कार्यकालका लागि पनि दोहोरिने भएका छन् । भदौं २९ गते कार्यका’ल सकिन लागेका उनलाई दो’होर्याउन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले तयारी था’लेका छन् । घि’सिङले नेपालमा लोडसेडि अ’न्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर विद्यु’तको कुसल व्य’वस्थापन गर्दै आएका थिए ।समाचार दैनिकसँग कुरा गर्दै मन्त्रीपुनले भने, उहाँको कार्यकाल अझै केही दिन बाँ’की नै छ । भदौं २९ गते अघि नै मन्त्रालयका तर्फबाट उ’हाँलाई दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्ती गर्नका लागि प्रस्ताव जाँदैछ । त्यो प्रस्तावलाई म’न्त्रिपरिषदले पा’रित गरेपछि उहाँ दोश्रो कार्यकालका लागि नियु,क्त हु’नुहुनेछ । यस वि’षयमा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री के’पी ओली र पा’र्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र,चण्डसँग समेत प’रामर्श गरेका छन् । सा’माजिक सञ्जाल तथा सार्व’जनिक बह’समा समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दो’होर्याउन आ’वाज उठिरहेको थियो ।
कार्यकारी नि’र्देशक घिसिङलाई ४ वर्ष अघि तत्कालिन ऊ’र्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दा’हाल प्र’चण्डले नियुक्ति दिएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छि’मेकी भा’रतबाट विजु’ली आयात गर्न एथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न स्वीकृति दिएको, नी’जि क्षेत्रबाट निर्मा’णाधिन केही परियोनाहरु सम्पन्न भएको र चुहावट भ’ईरहेको विद्युतको अनु’पात घटाउने लगायतका कद’मका कारण तत्कालिन सरकारले औ’द्योगिक क्षेत्र बाहेकको लो’डसेडिङ ह’टाएको थियो।औ’द्योगिक क्षेत्रमा समेत वि’द्युतको नियमित आपु,र्ति गराएर देशभर लोडसेडि मुक्त बनाएको भने अहिलेकै सरकारले हो । कार्यकारी नि’र्देशक घिसिङको कार्यकालमा केही राम्रा कामहरुको थालनी भएको छ भने के’ही प्रश्न’हरु उनिमाथि समेत तेर्सि’एका छन् । घि’सिङको कार्यशैलीलाई लिएर कति’पय विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत अ’सन्तुष्टि जनाएको कुरा यसअघि नै सा’र्वजनिक भईसकेको छ ।
घिसिङ को का’र्यकालमा के के काम भए ?
घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्त हुनुअघि देशमा १८ घ’ण्टा लामो लोडसेडिङ थियो । डेडिकेट फिडरका नाममा उद्योगधन्दालाई विद्युत दिने तर आम उपभोक्तालाई अन्धकारमा राख्ने प’रिपाटीमा आ’मूल परिव’र्तन गर्दै उनले उद्योगको वि’जुली काट्ने उप’भोक्तालाई उज्यालो दिने रणनीति बनाए ।
नियुक्त भ’एको २ महिनापछि कात्तिकको लक्ष्मीपुजाको दिनदेखि काठमाडौ उप’त्यकाबासीले लोडसेडिङको मार खेप्नु परेन । अरुले लक्ष्मी पुजा मनाइरहँदा उनी स्युचाटारको भारप्रेषण केन्द्र पुगे र लो’डसेडिङ हुन न’दिन अनवरत खटिरहे । ३१५ मेगावाट सम्मको मा’ग धान्न सफल भए । काममा द’त्तचित्त भएर ख”टिरहने उनको बानिको मन्त्री पु’नले समेत प्रशं’सा गरे’का छन् ।जसका परि’णाम स्वरुप विद्यु’तको चु’हावटमा नि’क्कै क’मि आयो । कुलमानले सबैभन्दा पहिला उत्पादन भएको एक चौथाइ विद्यु’त चुहा’वट हुने गरेकोमा पहिलो व’र्षमा तीन प्रतिशतले घटाए । आर्थिक वर्ष २०७२,०७३ मा केन्द्रिय विद्युत प्रणालीमा २५।७८ प्रतिशत वि’द्युत चु’हावट थियो । अहिले २०७६र०७७ सम्म आइपुग्दा वि’द्युत चुहा’वट १५।१७ प्रतिशतमा सि’मित छ ।
उप’भोक्ता बढ्दा, चु’हावट घट्दा स्व’भाविक हिसावले प्राधिकरणको घाटा कम र नाफा बढि हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रा’धिकरणले ११ अर्ब ना,फा कमाएको छ । नीजि क्षेत्रका विद्युत उत्पाद’कहरुले भने प्राधिकरणले ६ सय ५० मेगावाटको हा,राहा,रीमा उत्पा’दित विजुली सस्तोमा कि’नेर महं,गोमा बेचेका कारण धेरै ना’फा कमाउको प्रति’क्रिया दिने गरेका छन् ।
के के काम हुन स’केनन् ?
कुशल व्यवस्थापन क्षमताका बाब’जुत घिसिङको कार्यकालमा केही म’हत्वपूर्ण परियोजनाहरु अधुरै रहेभने केही उत्पा’दन भएको विजुली समेत खेर गईरहेको छ । तामाकोशी ज’लविद्युत आयोजना बेलैमा सम्पन्न नहुदा एकातिर लागत रकम बढिरहेको छ भने अर्कातिर आ’न्तरिक उत्पालनको कमिका का’रण भारत’बाट धेरै विद्युत आयात गर्नुपरेको छ ।रसुवागढी र म’ध्यभोटेकोशी दुई वर्ष प’हिल्यै आउनुपर्ने परियोजना आउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी एक वर्ष पहिले नै बनिसक्नुपर्ने सोलु को’रिडोर प्रसारण लाइन बन्न सक्या छैन । सो करिडोरमा उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्र’शारण लाईनको अ’भावमा खेर गई’रहेको छ ।
नुवाकोट जिल्लामा नि’र्मित २५ मेगावाटको सोला’र ऊर्जाबाट पनि लाभ लिन सकिएको छैन । जस’का कारण राज्यलाई करोडौंको नो’क्सानी पनि भईरहेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्र’ङकलाईन मार्फत वि,गतमा प्राधिकरणले उद्योग धन्दा संचालन गर्न दिएको १३ अर्ब बराबर पैसा उठाउन घि’सिङले सकेका छैनन् ।यस विषयमा सं’घीय संसद र सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उनिमाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रा’धिकरणले राज्यको उक्त रकम उ’ठाउन आ’लटाल गर्नुमा उनको मिलेमत्तो हुन सक्ने समेत लेखा समितिले आशंका गर्दै छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । उनले गर्न नसकेका कामका अलवा उनको कार्यशैलीका क’तिपय विषय पनि वि’वादको घेरामा रहने गरे’का छन् ।
जसलाई प्रधा’नमन्त्री ओलीले समेत रु’चाएका छैनन् । सरकारका तर्फ’बाट प्रधा’नमन्त्रीले, मन्त्रिले गरेका कामको समेत कार्यका’री निर्देशक घि’सिङले जस लि’ने गरेको र मिडि’यामा प्रचा’रवाजी गर्ने गरेको उ’निमाथि आ’रोप छ । घिसि’ङले सर’कारी खर्च’मा आ’फ्नो पक्षमा विभिन्न माध्यमबाट प्र’चारप्रसार गराउको आ’रोप समेत ला’ग्ने गरेको छ ।
जसका कारण लोड’सेडिङ हटा’एको श्रेय समेत तत्का’लिन प्रधा’नमन्त्री प्र’चण्ड, ऊ’र्जामन्त्री ज’नार्दन भन्दा पनि कुलमा’नलाई दिने प’रिवेश बनेको छ । उन’को यो शैली’बाट प्रधानमन्त्री नै अस’न्तुष्ट बनेका छन् । यस्तो अ’वस्थालाई खण्डन गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही दिन अघि विज्ञप्ती नै निकालेर प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका विरुद्ध आफ्ना पक्षमा प्र’चार नगर्न आ’ब्हान गरेका थिए ।तर कार्यकारी घि’सिङले त्यसअघि भने नी’ति कार्यक्रममा समावेश भएको वि’षय, मन्त्री पु’नले स्वे’त पत्रमार्फ अघि सारेका वि’षयलाई कार्यान्वयन गरेको कामलाई समेत आफैंले गरेको भनि प्र’चार गर्ने गरेको आ’रोप छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मासिक १० युनिटसम्म बिजुली ख’पत गर्ने परिवालाई नि’शुल्क विद्युत् दिने घो’षणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
संस्थाग’त हिसाबले सरकार र मातहतका निकायले जस लिनुपर्ने उक्त विषयलाई घिसिङले प्राधिकरणकै एकल निर्णयका रुपमा प्रचार गरे। घि’सिङले मात’हत कर्मचारीमाथि निरङ्कुश व्यवा’हार गर्ने गरेको आ’रोप पनि प्राधिकरणका क’तिपय कर्मचा’रीहरु लगाउछन् ।प्राधि’करण भित्रको सरुवा बढुवामा मन्त्रि पुनले पूर्ण अधिकार घिसि’ङलाई नै दिएका छन् । तर कतिपय सन्दर्भमा भने उनले प्र’धानमन्त्री तथा मन्त्रीले भनेका अत्या’वश्यक समा’योजन समेत नगर्ने गरेको श्रो’तको दावी छ। यो खबर सम’चारदैनिकले छा’पेको छ ।
भारतको सिक्किममा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घो,षणा गरिएको ऐतिहासिक क्ष,ण हेर्नुहोस्
प्रधानमन्त्री ओली यति ठूलो नि,र्णय गर्ने तयारीमा रहेको खुलासा, हुँदैछ सरकारमा ठू.लै प,रिवर्तन